एकीकृत जनक्रान्ति र जनप्रतिरोध – eratokhabar
एकीकृत जनक्रान्ति र जनप्रतिरोध
सिसम शाहीलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७६, २७ असार शुक्रबार ०७:०१ July 12, 2019 2045 Views
म मरेँ भने देशका लागि मर्नेछु ।
मेरो रगत यही देशको माटोमा मिलोस् ।
मेरो लास नेपाली भूमिमा मिलोस् ! – विप्लव
इतिहास कोर्नु वीरताको प्रतीक रहेछ । वीर हरूको रगत क्रान्तिमार्ग रहेछ । कायर र गद्दार हरूलाई इतिहासमा कहीँ अट्ने ठाउँ छैन ! सायद यो दोहो¥याउन मन लाग्छ ! क्रान्ति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग परेर लालगद्दारहरू संसदीय भासमा जाकिनुले फेरि पनि देश र जनताका लागि क्रान्ति आवश्यक छ ! फासिवादी सामाजिक दलाल संसदीय व्यवस्थाले देश दिनानुदिन भ्रष्टाचारको महाजालमा फस्दै गएको छ भने देशीविदेशी दुस्मन र साम्राज्यवादीहरू नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणभूमि बनाउन व्यस्त छन् चाहे त्यो इन्डो–प्यासिफिकका नाममा होस् चाहे बिमस्टेक होस् । यी सबै कुराले गर्दा नेपाल अब स्वतन्त्र छैन ।
यी घटनाहरुले कसैको इसारामा चल्ने र चलाउने दलाल नेताहरू कठपुतली र बुख्याँचा भएको स्पष्ट हुन्छ । आज नेपाल र नेपाली हुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनअधिकारका पक्षमा सशक्त आन्दोलन र क्रान्ति जारी राख्दै सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी बुद्धिजीवी, राष्ट्रसेवक एक ठाउँमा गोलबन्द हँुदै दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु एकीकृत जनक्रान्तिको मूल उद्देश्य हो । भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आतङ्क, गुन्डागर्दी केपी– पीके एन्ड बादल कम्पनी फासिवादी जनहत्यारो सरकारको लुट नेपाल लुटिने जनता भन्ने नाराको विकास हो । विकृति–विसङ्गति बेथितिले सिमाना नाघेपछि जनताको सरकार नभएर जनहत्यामा उत्रेपछि नेपाली जनताले लोप्पा खुवाइदिन्छन् । आज यो दलाल सरकार आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न विभिन्न बहानामा गुलियो नारा दिएर विष वर्षा गर्दैछ । जनताको आशालाई निराशामा बदल्दै जनहत्यामा उत्रिनु जनतामा आक्रोश, घृणा र बदलाभाव पैदा हुनु भनेको क्रान्तिकारिता पैदा हुनु हो । आज दलाल सरकारविरुद्ध देशव्यापी जनप्रदर्शन भएका छन् । वाइडबडी, नगरिकता विधेयक, निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्ड, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड हँुदै प्रधानमन्त्री स्वरोजगारसम्म र नेकपामाथिको फागुन २८ देखिको प्रतिबन्धले दलाल केपी–पीके एन्ड बादल कम्पनीविरुद्ध प्रतिरोध सुरु भएको छ ।
एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको देशभरिको जनउभार देखेर अत्तालिएको फासिस्ट सरकार बन्दुक देखाएर तर्साउने कुचेष्टा गरिरहेको छ । सरकारले कालीकोट, भोजपुर र सर्लाहीमा निहत्था नेता–कार्यकर्ता मारेर मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन गरेको छ । आफैँ बनाएको संविधानको खिल्ली उडाएको छ । आज देशका गाउँगाउँमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरी सर्च एन्ड एरेस्टका नाउँमा, दोहोरो भिडन्तका नाउँमा इन्काउन्टर गरेको छ । गैरन्यायिक हत्या गरेको छ । भोजपुरमा तीर्थ घिमिरे, सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका हत्या यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
जहाँ अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघेको हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ । आज देशका कुनै पनि मानिस यो दलाल सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । त्यही पार्टीका झोले कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट नहुनु भनेको दलालको दिनगन्ती सुरु हुनु हो । उखाने नेता केपी वली युरोप भ्रमण गएको बेला विप्लवलाई गोन्जालो बनाइदिने धम्की पो दिएछन् । काल आयो भने स्याल सहर पस्छ भन्छन् । केपीलाई त्यही भएको छ । पूर्वमाओवादीको काँधमा बन्दुक राखेर माओवादी सिध्याउन एमाले र खासमा ‘मिस्टर क्लाउड’ लाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि बादल भरपूर रुपमा परिचालित छन् । हिजो झापामा टाउको काट्ने केपी जनयुद्धमा सत्र हजारको रगतमा होली खेल्ने प्रचण्डहरू आज फेरि जनता मार्न लागिपरेका छन् ।
अराजकता, दण्डनीय अपराध, राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचार गर्ने दलालका विरुद्ध विद्रोहको ज्वाला दन्किसकेको छ । अब यो विद्रोहको ज्वाला निभाउन सक्छु भनेर कथित केपी–पीके एन्ड बादल कम्पनीले सोच्ने कुरा तिनीहरूको दिवास्वन मात्रै हो । पूर्वमा मेची जागिसक्यो । पश्चिममा महाकाली जुर्मुराउँदैछ । हिमाल निडर र अटल भएर साहस गर्दै छ भने पहाड क्रान्तिको उर्वर भूमि हो । तराई क्रान्तिको आधार हो । यहाँ क्रान्तिलाई चाहिने सबैथोक भरिपूर्ण छ । जनता जागिसके । रात बिहानीमा उषाकिरण बनेर आइसक्यो ! होसियार दलालहरू, अब तिम्रा थोत्रा बन्दुक र पालिएका गुलामी कारिन्दाहरूको परबाह छैन । तिम्रा जेल निष्काम भइसके । जनताको आवाज जनताको आक्रोश शक्तिमा बदलिनेछ । तिमीहरूको लुटको स्वर्ग तासको महलझैँ खरानी हुनेछ । जनताको राज स्थापना हुनेछ । क्रान्तिकारी जनताको प्रतिरोध लाखौँ गुणा शक्तिशाली हुनेछ ।
एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद ! वीर सहिद लालसलाम ! हाम्रो जित सुनिश्चित छ !
२०७६ असार २७ गते शुक्रबार प्रकाशित
सरकार नागरिक हत्यामा उत्रियो : नेकपा (विज्ञप्तिसहित)
हरैयाका सुकुम्बासीलाई उठिबास गरे कडा प्रतिकार गर्ने नेकपाको चेतावनी